पूर्वमेजर जनरल बक्क्षीले लगाए प्रधानमन्त्री ओलीमाथि गम्भीर आरोप - Khabar Break | Khabar Break
काठमाडौं । भारतीय मिडिया र त्यहाँका नागरिकले नेपालमाथि विभिन्न आक्षेप लगाउने क्रम जारी छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि उनीहरूले अत्यन्त निम्नस्तरमा गालीगलौज गरिरहेका छन् । झन् भारतीय न्यूज च्यानल बन्द गरिएपछि त भारतीय नागरिकले सन्तुलन नै गुमाएका छन् ।
यही क्रममा पूर्वभारतीय मेजर जनरल जीडी बक्क्षीले प्रधानमन्त्री ओली र चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीप्रति आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएका छन् । बक्क्षीले ट्विटरमार्फत होउ यान्छीलाई इष्ट इन्डिया कम्पनीका ब्रिटिस नागरिक भाइस रायको उपमा दिँदै उनकै निर्देशनमा नेपालमा भारतीय मिडिया बन्द भएको आरोप लगाएका छन् । भारतमाथि व्यापार गर्न आएको इष्ट इन्डिया कम्पनीले भाइस रायकै नेतृत्वमा भारतलाई आफ्नो गुलाम बनाएको थियो ।
अहिले चिनियाँ राजदूत यान्छीको सक्रियता नेपाललाई तीव्र रुपमा तिब्बतीकरणको बाटोमा लैजानु रहेको उनको संगीन आरोप छ । बक्क्षी तिनै हुन्, जसले नेपालले लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको नक्सा जारी भएपछि भारतीय मिडियामा नेपालप्रति विष वमन गरिरहेका छन् । उनले नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीलाई चाउचेस्कुको नयाँ संस्करण भएको आरोप पनि लगाएका छन् ।
अमेरिकाका कोरोना विशेषज्ञ डा. एन्थोनीलाई ज्यान मार्ने धम्की
ट्रम्पलाई कारबाही : फेसबुकले हटायो पोस्ट, ट्वीटरले रोक्यो अकाउन्ट
फेसवुकले किन डिलिट गर्‍यो ट्रम्पको स्टाटस ?
लेबनानमा विष्फोट भएको अमोनियम नाइट्रेट के हो ?